အာမခံကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအကြောင်း တစေ့တစောင်း - Young Insurance
Home » Posts » Articles » အာမခံကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Articles, Posts May 11, 2021 12:16 pm
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာမခံနဲ့ပက်သက်ပြီး သိပ်မတွင်ကျယ်သေးတာကို အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ…ဘာ့ကြောင့်လဲ…? ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ…? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အားလုံးကြိုးစားနေကြသူတွေ့ရှိကြပါတယ်…
ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကို အာမခံနဲ့ပက်သက်ဖူးတဲ့ သူတွေအားလုံးသိကြပါတယ်… သူတို့ကတော့ အာမခံကိုယ်စားလှယ်တွေပါပဲ…
အာမခံနဲ့မပက်သတ်ဖူးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလှပါတယ်…ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ အသေးစိတ်ကျပြီး အချက်အလက်တစ်ခုမှားတာနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်…
ဒီလိုပြဿနာတွေကို အဓိကတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးနိုင်တာကတော့ အာမခံကိုယ်စားလှယ်များပဲဖြစ်ပါတယ်…
အာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အာမခံကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ ပေါ်လစီတွေ၊ လျော်ကြေးပေးချေမှုတွေ၊ အာမခံနည်းစနစ်တွေကို ကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ကြပြီး အာမခံထားလိုသူတွေကိုလည်း ဘယ်လိုအာမခံအမျိုးအစားတွေက သင့်တော်ကောင်းမွန်ပြီး ဘယ်အာမခံကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေက တိကျမြန်ဆန်လဲဆိုတာကို အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ရယူမယ်ဆိုရင် အပိုကြေးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလို ၊ အချိန်ကုန် အလုပ်ပျက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရာတွင်လည်း အမှားအယွင်းများမရှိပဲ အကောင်းမွန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်…
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာ အာမခံဝန်ဆောင်မှုကို ရယူတော့မယ်ဆိုရင် အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်တော့ ရှိသင့်ပြီး ထိုကိုယ်စားလှယ်ဆီကနေ အကြံဉာဏ်ယူပြီး ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်….
FRD ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စီစစ်ရေးဌာန၊ IBRB အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စီစစ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ တရားဝင်လိုင်စင်ရ အာမခံကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အာမခံကုမ္ပဏီတွေအားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်…
ဒါကြောင့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလည်း အာမခံလောကတွင်လွန်စွာမှ အရေးပါလှပြီး အာမခံကိစ္စအဝဝကို သိရှိနားလည်ပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မယ့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်ကြီးများနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ ယမ်းအာမခံမှ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်…